Tsy azo ataotao foana nefa ny mikitika na mitady vahaolana hampihenana haingana io kibo io. Misy ny fepetra arahina, sao vao mainka hanimba azy izany, ka haharatsy tanteraka ny bika. Torohevitra avy amina “coach sportif”, izay notanterahina reny avy niteraka, ireto entina aminao ireto.
Arindra ny fisakafoana
Tsy mitombina izany hoe : vao teraka andro vitsy monja, dia ho fisaka sahady ny kibo. Na izany na tsy izany aza nefa, miankina amin’ny zavatra hanina sy ny fomba fihetsika ihany koa, ny mety hiverenan’ny vatana amin’ny laoniny, toy ny taloha, na hahazoany bika vaovao. Mila mizatra misakafo amin’ny ora mitovy ary atao ora raikitra ihany koa ny tohan’aina. Ialao ny fiheverana fa afaka mihinan-kanina foana sy tsy mijanona, satria mampinono.
Amboarina ny fihetsika
Herinandro na folo andro ao aorian’ny fiterahana, rehefa somary modimody ny aina, dia afaka manamboatra fihetsika amin’izay : rehefa hipetraka, hitsangana, na hihetsika, na koa hampinono, dia atao mikolo ny kibo izany. Ialao ny fihetsika tsy mivaky loha, ka avy dia mivoretaka amin’izay atao rehetra. Ny atao : ampiasaina ny hoza-kibo. Miezaka manetsika moramora sy tsikelikely azy, rehefa miaina, rehefa mandeha an-tongotra, na mivezivezy ao an-trano. Manafisaka kibo tsikelikely izany.
Tsy manao “régime” mihitsy
Aza misaina kely akory an’izany hanao “régime” izany mihitsy, na te ho fisa-kibo tahaka ny inona aza. Ny “régime” dia manjanaka ny saina hifidifidy izay harapaka. Rehefa mampinono anefa, dia alavirina mihitsy izany hifehy kibo noho ny bika izany. Ny zaza no atao an-tsaina, ka hanina avokoa izay fantatra fa mahasoa azy. Tadidio ihany koa fa tsy tokony ho latsaky ny 1.800 Kaloria isan’andro ny sakafo hanin’ny reny mampinono.
Manao fampihetseham-batana moramora
Azo atao ny manao fampihetseham-batana, saingy tsy ireny mahery setra ireny akory, fa amin’ny alalan’ny fihetsika madinika ao an-trano ihany. Ahetsika moramora ihany koa ny hozatry ny lamosina, rehefa zatra tsara ny an’ny kibo. Averimberina sy atao fahazarana ao an-trano izany, rehefa matory ny zazakely.